ဘဝမှတ်တိုင်: iPhone4User တိုအတွက် iOS 7.1 tethered jailbreak လုပ်နည်း.....
iPhone4User တိုအတွက် iOS 7.1 tethered jailbreak လုပ်နည်း.....
iPhone4User တို.အတွက် Jailbreak လုပ်နည်းပါ.....Jailbreak Tool Version Update ပေးလိုက်သောကြောင်. ပြန်ရှယ်ပေးလိုက်ပါတယ်.........ဒီနည်းလမ်းက tethered jailbreak ဖြစ်သောကြောင်. IOS 7.0.4/5/6 တွင် Jailbreak လုပ်ထားသောသူတွေအတွက် IOS 7.1 မတင်ကြရန်သတိပေးပါ သည်။အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင်. IOS 7.1 တင်ထားသူတွေအတွက် tethered jailbreak လုပ်ချင်ပါ က အောက်ကနည်းလမ်းလေးအတိုင်း.....ဆက်လုပ်ပေးပါ.......
tethered jailbreak Tool ကို
ဒီနေ.မှ Update ပေးထားသော နောက်ဆုံးဘားရှင်းလေးပါ ခင်ဗျ။
မိမိတို.၏ ကွန်ပျူတာတွင် JDK ကို install လုပ်ပေးရပါမည်။
JDK ကို ဒီမှာယူပါ။
jailbreak Too ကို Run လိုက်ပါ.....
Jailbreak Tool ကို Run ၇ာတွင် Run as administrator ဖြင်. Run ပေးပါ။
မိမိ တို.၏ iPhone4ကို USB ကြိုးဖြင်. Pc ကိုချိတ်လိုက်ပါ။ပြီးရှု Jailbreak ကို ကလစ်ပေးပါ။
အောက်ကပုံလေးအတိုင် ပေါ်လာရင် မိမိတို၏ iPhone4ကို DFU mode ဝင်ပေးပါ။
DFU Mode ဝင်ပြီးပါက အောက်ကပုံလေအတိုင် Jailbreak လုပ်နေပါလိမ်မည်..........
ပါဝါ ပြန်တက်လာရင် အောက်ကပုံလေးအတိုင် ပေါ်နေပါလိမ်မည်......DFU Mode ထပ်ဝင်ပေးလိုက်ပါ။
အောက်ကပုံလေးအတိုင် Booting လုပ်နေပါလိမ်မည်။
ပါဝါ ပြန်တက်လာပါလိမ်မည်။ ပြီးရင်ခဏစောင်.ပေးပါ။ ပါဝါပြန်ကျပြီး Reboot ထပ်လုပ်ပါလိမ်မည်။
ပါဝါပြန်တက်လာသောအချိန်တွင် အောက်ကပုံလေးအတိုင်ပေါ်နေပါလိမ်မည်။ DFU Mode ထပ်ဝင်ပေးပါ။
ပါဝါပြန်တက်လာသောအခါ......ဘော်ဘော်တို.တောင်းတနေသော Cydia Icon လေးကိုမြင်တွေရပါလိမ်မည်။
အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင် Reboot လုပ်မိပါက Jailbreak Tool ကိုပြန် Run ပါ။မိမိ တို.ဖုန်း အမျိုးအစားအလိုက် ရွေးပြီး ကလစ်ပေးပါ။ ကျွန်တော်ဖုန်းက GSM ဖြစ်သောကြောင်. iPhone4GSM ကိုရွေးကလစ်ပေးလိုက်ပါတယ်....ပြီးရင် DFU Mode ဝင်ပေးလိုက်ပါ။
Credit..by KO MIN
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 6/06/2014 09:00:00 am
C Chit 23 August 2015 at 09:04
Iphone root လုပ်နည်းတင်ပ္ပေါအုံးဗျား ကွန်ပျူးမလိုဘဲ